VaZuma Votarisirwa Kusangana naVaMugabe naVaTsvangirai
Vari kumirira mapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa munhaurirano dziri kuitwa vanoti vakumbira mutongi gava pagakava remuZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, Va Jacob Zuma, kuti vaende kuZimbabwe kunoita hurukuro nevatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Izvi zvabuda pamusangano wenhaurirano dzakatanga neChina muCape Town kuSouth Africa, idzo dzakapera neChishanu.
Vamiriri vemapato vanga vachiedza kugadzirisa zviri kunetsa vachikokerwa nezvipangamazano zvaVaZuma.
Zvinonzi pawiriranwa kuti VaZuma vaende kuZimbabwe kuti vanozeya nevatungamiri vemapato vanoti VaMorgan Tsvangirai veMDC-T, VaRobert Mugabe veZanu PF, pamwe naVaWelshman Ncube ve MDC-N.
VaZuma vachange vachikurukura pamusoro penyaya dzanetsa idzo dzinosanganisira hwaro hwesarudzo, kuvandudzwa kweZimbabwe Electoral Commission, pamwe nemashandiro emapurisa, vasori nemauto munguva dzesarudzo.
Vanomirira MDC inotungamirwa naVaTsvangirai muhurukuro idzi, VaElton Mangoma, vanoti vabvumirana neZanu PF pazvinhu zvakawanda, asi vakasawirirana pane zvimwe, izvo zvava kupa kuti VaZuma vaende kuZimbabwe.